कम्फरटेबल सरकार बनाउन खोज्ने प्रचण्ड असफल, जसपा र कांग्रेसले गरे ओलीको पक्षम यस्तो निर्णय ! - Prateek Nepal
काठमाडौं – आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले थालेको पहलको पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले कांग्रेस नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्न सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको धारणा आधिकारिक धारणा मागेका थिए ।
माओवादीले वर्तमान सरकारको विकल्प अपरिहार्य रहेको भन्दै देउवाको प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि जसपाले तत्काल सहकार्यको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।
‘कांग्रेसले पहिलोपटक नयाँ सरकार बनाउनेबारे प्रस्ताव गर्यो । हामीले छलफल गर्छौ मात्रै भनेनौ, हाम्रा माग पूरा गर्न सरकार लागिपरेको पनि जानकारी दिएका छौं’, बैठकपछि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने ।
बैठकमा ठाकुरले नै जसपाका मागबारे सरकारले काम गरिरहेको र माग सम्बोधन हुने अवस्थामा नयाँ सरकारबारे नसोचिने बताएका थिए । जवाफमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले जसपाको माग पूरा गर्न आफूहरु पनि तयार रहेको बताए ।
यद्यपि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले उधारोमा नभएर नगदमै आफ्ना माग पूरा गराउन चाहेको बताएका थिए । बैठकमा सहभागी जसपा नेता राजेन्द्र महतोले पनि कांग्रेस नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्न सम्भव नरहेको बताए । ‘ओली सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्दैछ ।
हिजोमात्रै राजनीतिक ब’न्दी रि’हाइको प्रक्रिया सुरु भयो । यसैले हाम्रो माग पूरा गर्छ भने नयाँ सरकार किन बनाउने रु’, महतोले नेपाल प्रेससंग भने ।उनका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीको निर्णय सुनाए पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल छैन ।
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेबारे हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको छैन । ओलीले हाम्रो माग पूरा गरेनन् भनेमात्रै देउवाको बारेमा सोच्ने हो’, महतोको भनाइ छ ।
बैठकको प्रारम्भमै सभापति देउवाले राखेको प्रस्तावबारे जसपा अध्यक्ष ठाकुरको प्रतिक्रिया सुनेपछि कांग्रेस–माओवादी नेताहरु निराश बनेका थिए । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दावी गरेपनि जसपाले ओलीसंगै सजिलो मानेजस्तो देखियो ।
नयाँ सरकार बन्न गार्हो हुने देखियो’, बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले नेपाल प्रेससंग भने । बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले वैकल्पिक सरकार गठनबारे छलफल सुरु भएपनि जसपाको निर्णय पर्खनुपरेको बताए ।
‘कांग्रेसको प्रस्तावमा हामी सकरात्मक छौ तर जसपाले छलफलका लागि समय मागेको छ । जसपाले निर्णय लिएपछि मात्रै थप विषय अगाडि बढ्नेछ’, श्रेष्ठले पत्रकारहरुसंग भने ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले आफ्नो प्रस्ताव राखिसकेकाले जसपाको निर्णयपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए । ‘अब जसपाले निर्णय लिएपछि मात्रै नयाँ सरकारबारे ठोस कदम चाल्ने अवस्था बन्नेछ’, शर्माले पत्रकारहरुसँग भने ।
बूढानीलकण्ठ बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवासंगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्व विमलेन्द्र निधि र बिजयकुमार गच्छदार, महामन्त्रीद्वय डा।शशांक कोइराला , पूर्णबहादुर खड्का र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए ।
त्यस्तै माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए । जसपाबाट ठाकुर र महतोबाहेक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई उपस्थित थिए ।
चैत २० गते कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन अग्रसरता लिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको एक सातापछि मात्रै सभापति देउवाले सत्ता समीकरणको औपचारिक प्रयास गरेका हुन् ।
पहिलो बैठकमै जसपाले तत्काल वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नदेखेको बताएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनको प्रयास यथास्थितिमा सम्भव नहुने देखिएको छ ।
मलेसियामा नेपाली युवालाई मृ’त्यद’ण्डको फैसला
September 7, 2020 September 7, 2020 Ramash kunwar
बाइडेनसँग हारेपछि रिसले रातोपिरो बनेका ट्रम्प जादाजादैँ चीन वि’रुद्ध यस्तो भयङ्कर ठूलो कदम चाल्दैँः तनावमा चीन, अब के होला ?
January 17, 2021 January 17, 2021 Ramash kunwar
विदेशबाट भिसा आएपछि काठमाडौं जान हिँडेका थिए पुर्व नेपाली आर्मीका जयसिंह, तर बाटै बाट भए बे’पत्ता